Banijya News | लामखुट्टेले टोकेर हैरान बनायो ? यहाँ छन् लामखुट्टे भगाउने सरल उपाय - Banijya News लामखुट्टेले टोकेर हैरान बनायो ? यहाँ छन् लामखुट्टे भगाउने सरल उपाय - Banijya News
लामखुट्टेले टोकेर हैरान बनायो ? यहाँ छन् लामखुट्टे भगाउने सरल उपाय
२८ बैशाख २०७७
के तपाईको घरमा लामखुट्टेले टोकेर कस्न नसक्ने अवस्था छ । गर्मी बढ्यो, अब लामखुट्टेले टोक्ने भए अनि डेंगु वा मलेरिया लाग्ने सम्भावना छ । अनी कसरी लामखुट्टे भगाउँने भन्ने चिन्तामा हुनुहुन्छ छ भने नआत्तिनुहोस् ! अब सजिलै लामखुट्टेबाट छुटकारा पाउन प्रकृतिक विकल्प पत्ता लागेको छ । केही प्राकृतिक उपायहरु अपनाएर लामखुट्टेलाई भगाउन सकिने छ ।
हामी हाम्रो घरमा लामखुट्टेका कारण विभिन्न केमिकलयुक्त औषधिको प्रयोग गर्ने गरेका हुन्छौ । यस्ले लामखुट्टेलाई मात्र होइन मान्छेलाई समेत असर गर्ने गरेको हुन्छ तसर्थ घरेलु उपाय नै यस्को उत्तम बिकल्प हुने गरेको छ । हामीले यँहा लामखुट्टे हटाउने केहि घरेलु उपायका बारेमा चर्चा गर्दै छौ ।
ल्वांगको तेलको बासना
हामीले प्रयोग गर्ने ल्वांगको तेलको बासनाले लामखुट्टे भाग्ने गर्दछन । त्यसैले नरिवलको तेलमा ल्वांग तेल मिसाएर शरीरमा लगाउनाले लामखुट्टेले टोक्दैन । यसले हामीले प्रयोग गर्ने ओड़ोमसको काम गर्ने गर्दछ ।
घरवरिपरी सयपत्री फूल रोक्ने
लामखुट्टेलाई सयपत्री फूलको गन्ध मन पर्देन् । तसर्थ हामीले आफ्नो घरमा लगाउने सयपत्री फुलको बासनाले पनि लामखुट्टे भाग्ने गर्दछ । त्यसैले घर वरिपरी सयपत्री फुल लगाउनाले लामखुट्टे पनि भाग्ने र घरको सौन्दर्य पनि बढ्ने हुन्छ ।
कपुर पानी को प्रयोग
कपुर र पानी प्रयोग गरेर लामखुट्टे भगाउन सक्नुहुन्छ जसका लागि दुई टुक्रा कपुर एक चौथाई कप पानीमा हाल्नु भयो भने जादूझै लामखुट्टे भगाउन सक्नुहुन्छ । र यदि उक्त पानीमा अर्को टुक्रा कपुर मिसाउनु भयो भने त झन चाँडो लामखट्टे भाग्दछन् । त्यस्तै कपुरको एक टुक्रा जलाएर कोठामा राख्दा यसबाट आउने बासनाले लामखुट्टे भाग्ने गर्दछ । यो लामखुट्टे भगाउने सजिलो घरेलु तरिका हो ।
लिक्विड रिफिलमा कागतीको रस राख्ने
अर्को घरेलु तरिका हामीले प्रयोग गर्ने लिक्विड रिफिलमा कागतीको रस राखेर प्रयोग गर्दा लामखुट्टे भगाउन सकिन्छ । यसको प्रयोगले लामखुट्टे मर्ने गर्दछन । यसलाई हप्तामा दुई पटक प्रयोग गर्दा काफी हुने गर्दछ । त्यस्तै लामखुट्टेलाई भगाउन निमको पातलाई जलाएर मर्न सकिन्छ । करिब आधाघण्टा धुवा गर्नाले लामखुट्टे मर्छन ।
नीमलाई प्राकृतिक औषधिका रूपमा लिइन्छ र यसमा एन्टीब्याक्टेरियल गुणहरू पाइन्छ । अध्ययन अनुसार नीमको तेलमा अन्य केमिकलयुक्त धूपमा भन्दा दश गुणा बढी लामखुट्टे मार्नसक्ने शक्ति हुन्छ । यसको प्रयोगले स्वास्थ्यमा कुनै प्रकारको असर हुँदैन । नीमको पेस्ट छालामा दल्दा लामखुट्टे शरीरको वरिपरि आउँदैनन् ।
घरमा लसुन त हुने नै भो । बढी लसुन हालेको खाना प्रयोग गर्नुभयो भने लामखुट्टे लुसन खाएका मानिसबाट टाढा हुन्छ ।
तुलसी, पानी र भोड्काको आयुवेर्दिक स्प्रे
लामखुट्टे भगाउने क्रिमहरु प्रयोग गर्नुहुन्छ ? यसलाई छाडिदिनुहोस् । अब तपाईं आफैं घरेलु प्रविधिबाट लामखुट्टे भगाउने स्प्रे बनाउन सक्नुहुन्छ । यसका लागि तुलसी, पानी र भोड्का जस्ता घरमै उपलब्ध हुने सामग्रीहरु चाहिन्छन् । पहिला तुलसी र पानी उमाल्नुहोस् र तुलसीलाई राम्रोसँग निचोरेर आएको पानीलाई एउटा सफा बोतलमा राख्नुहोस् । बोत्तलमा जति पानी छ, त्यसको आधा भोड्का थप्नुहोस् । बिस्तारै हल्लाउनुहोस् । तपाईंको घरमै अब लामखुट्टे धपाउने स्प्रे तयार भयो ।